Ukuhlanzwa kuhhavini iBristol
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » GB » Ukuhlanzwa kuhhavini iBristol1
Ikhodi Yokuposa: BS1 1EH
I-My Cleaners Bristol iphakamisa izinsizakalo eziningi zokuhlanza kanti enye yazo ukuhlanza i-oveni. Sisebenzisa kuphela amathuluzi wokugcina aphezulu kanye nezinsipho. Ungakhathazeki uma ukungcola sekuqongelele ithimba lethu lochwepheshe lizonakekela ukuthi lisuswe ngobuchwepheshe bethu obukhethekile bokuhlanzwa kwehhavini ongalimazi indawo. Ungakhokha ngaphambi noma ngemuva kwensizakalo, ngezindlela ezimbili-ukheshi noma i-PayPal. Vakashela iwebsite yethu ukuze ufunde kabanzi ngezinsizakalo zethu noma uma unanoma yimiphi imibuzo sishayele ku-011 7242 0497.
Ibhaliswe ku 19. Aug 2020
Ibhaliswe ku August 19, 2020
Izikole eziseduzane BS1 1EH